डीभी/पीआरधारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेपालीहरु कुवेत फर्कदा दु:ख दिने क्रम रोकिएन ,दुताबासको कुरा किन सुनेन श्रम र बिमानस्थलले ?
२ लाख कार्यकर्ता उतार्ने कस्तो छ एमाओवादी योजना? →
डीभी/पीआरधारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित
Posted on 25/02/2015 by शिव पौडेल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौं, फाल्गुन १३ – डीभी/पीआरधारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेसहितको निजामति सेवा ऐन संशोधन विद्येयक २०७१ संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । पारित विद्येयक संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । संसदबाट पारित भएपछिमात्रै विद्येयक कानुनकोरुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।
विद्येयकमा डीभी/पीआरधारी कर्मचारीलाई कारबाही, सेवाको विशिष्टिकरण, कार्यालय समयमा उपलब्ध गराउने विशेषज्ञ सेवाको नियमनलगायत उल्लेख छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले यसअघि नै संसदमा दर्ता गराएको विद्येयक पारित भएको थिएन । उक्त विद्येयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन थियो ।
विद्येयकमा सत्तापक्षबाट अवरोध भएपछि पण्डितले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाईसमेत गुहारेका थिए ।